Gobolka Minnesota oo aqoonsaday shaqada nin Soomaali ah
Gobolka Minnesota oo aqoonsaday shaqada nin Soomaali ah	Last Updated on Thursday, 10 May 2012 17:59	Thursday, 10 May 2012 12:59	Abdulrahman Adem oo u shaqeeya Minneapolis Public Schools ayaa la aqoonsaday shaqadiisa iyo dadaalkiisa ku aadan waxbarashada ardada Minneapolis. Aqoonsiga uu helay Abdulrahman waa heer goboleed. State-ka Minnesota ayaa aqoonsaday shaqadiisa waxayna ku tilmaameen in uu yahay miracle worker.
70 Kun oo qof oo ka shaqeysa waxbarashada gobolka Minnesota ayaa laga aqoonsaday 5 qof oo uu ku jiro Abdulrahman. Sidoo kale waxaa isla goobtaas Award ku siiyay oo sidoo kale aqoonsaday shaqadiisa iyo dadaalkiisa Dr. Saeed Fahiye oo madax u ah Confederation of Somali Community.
Aqoonsiga ugu weyn ee uu Abdulrahman helay waxay ahayd sida uu uga qeybqaatay xiriirka ay iskoolada la leeyihiin waalidiinta gaar ahaan tan jaaliyada Soomaalida. Si uu ardaygu ku hormaro waa muhiim in uu jiraa xiriir wanaagsan oo dhexmara barayaasha iyo waalidiinta ardayda. Abdulrahman arintaas qeyb libaax ayuu ka qaatay.
Shaqadiisa kuma koobna waqtiga uu shaqada ku jiro oo kaliya. Abdulrahman waqti badan iyo saacado farabadan oo aanan lacag lagu siinin ayuu geliyaa waalidiinta iyo ardada Soomaalida. Hoos ka aqriso aqoonsiga Abdulrahman oo English ah.